ကျွန်တော် ခရီးက ပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီ…. ဒါပေမယ့်လည်း စာတော့ မရေးနိုင်သေးဘူးဗျ.. တစ်ရက်လောက်တော့ နားလိုက်ဦးမယ်… ဓာတ်ပုံလေးတွေ အရင်ကြည့်ကြပါ – AHUNT BHONE MYAT
One thought on “ကျွန်တော် ခရီးက ပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီ…. ဒါပေမယ့်လည်း စာတော့ မရေးနိုင်သေးဘူးဗျ.. တစ်ရက်လောက်တော့ နားလိုက်ဦးမယ်… ဓာတ်ပုံလေးတွေ အရင်ကြည့်ကြပါ”
မြန်မာမှန်ရင် ပုဂံရောက်ဖူးရမယ်တဲ့။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်မ ပုဂံကိုတစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး။ တစ်နေ့တော့ ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ရှားပါးရှေးဟောင်းရတနာအမွေစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ ပုဂံမှ ဓါတ်ပုံများကို သေချာဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် :)